I-Snapchat iyaqhubeka nokwenza umahluko | Iindaba zeGajethi
Imiyalezo edumileyo kunye nenkonzo yokufowuna ngevidiyo ngene Iyaqhubeka nokuseta isantya sokhuphiswano olunamandla kwaye ikhuphe uhlaziyo olutsha kunye izinto ezintathu ezinomdla nezonwabisayo eziza kukwazi ukukopa ezinye iinkonzo kungekudala, ngaloo ndlela bethembekile kwisithethe sabo.
Uhlaziyo olutsha lwe Snapchat,Kuzo zombini izixhobo ze-iOS kunye ne-Android, kubandakanya amandla okwabelana ngazo zonke iintlobo zonxibelelwano ngokukhuselekileyo, ukutshintsha ilizwi lethu kunye nokutshintsha imvelaphi esivela kuyo, ilungile ukuba awufuni ukuba abahlobo bakho bazi apho ukhoyo?
Zonke iindaba ezivela ku-Snapchat
Zintathu izinto ezintsha ezithe zangeniswa ngene ngohlaziyo lwayo lwamva nje; trio yeempawu ngazo iqonga lizama ukwahlula kukhuphiswano ukuba, kumaxesha akutshanje, kwaye ukungabikho kweembono zantlandlolo, zinikezelwe ukukopa imisebenzi yayo phantse ngendlela ethukisayo. Funda u-Facebook, u-Instagram, uMthunywa kunye noWhatsApp, bonke bephantsi kwenkampani kaMark Zuckerberg, esele bezamile ukungaphumeleli ukuthenga i-Snapchat ngomhla wakhe.
Inoveli yokuqala ibizwa ngokuba Iphepha kwaye ayikho enye into ngaphandle kokuba kunokwenzeka thumela zonke iintlobo zonxibelelwano lwangaphandle, into eyayinqunyelwe kakhulu ngaphambili, ke into entsha, ngaphezulu kokufika kwayo, lulwandiso lwayo. Kwaye ukunqanda iingxaki, inkampani iyancoma ukhuseleko lwayo ngokusebenzisa izixhobo zayo zokhuseleko kunye nokusetyenziswa kwenkonzo yokukhangela ngokukhuselekileyo kuGoogle. Ke, Abasebenzisi baya kulumkiswa ngewebhusayithi ezingalunganga, i-malware okanye ubuqhetseba obunokwenzeka. Cinezela i icon yeklip kwaye uthumele ii-hyperlink zakho, ngelixa ezantsi kwescreen uza kubona abo ufumana; Cofa kuzo kwaye unokufikelela.
Ezona zikhetheke kakhulu zezi amacebo okucoca ilizwi eya kuvumela abasebenzisi ukuba batshintshe ilizwi labo ngaphandle kweefilitha ezibonakalayo xa bethumela iividiyo. Cinezela i icon yesithethi kunye nokufikelela kwiifilitha.
Okokugqibela, i iindawo zangemva, okanye ukubanakho ukutshintsha imvelaphi ovele kuyo. Cinezela nje isithonjana sesikere, "sika" i-silhouette yakho ngaphambili, kwaye usebenzise imvelaphi oyifunayo.
Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukukopa iindaba ze-Snapchat? Beka ukubheja kwakho
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » I-Snapchat iyaqhubeka nokwenza umohluko
Ungasonyusa njani isantya se-WiFi ekhaya